DHAGEYSO: Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xukun dil ah ku fulisay Macallin Ilkacase iyo labo kale.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xukun dil ah ku fulisay Macallin...
DHAGEYSO: Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xukun dil ah ku fulisay Macallin Ilkacase iyo labo kale..
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa subixii Axadda maanta waxa ay xukun dil ah ku fulisay Maxamed Xaaji Axmed oo Caan ku ahaa (Macalin Ilkacase) iyo laba Xubnood oo kale oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab.
Xukunkaan toogashada ah ayaa ka dhacay fagaaraha Dugsiga Tababarka Janeraal Kaahiye ee Iskuul Bulusiya, waxaana halkaasi lagu toogtay Maxamed Xaaji Axmed (Macalin Ilkacase) iyo Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Siciid Maxamed, kuwaas oo lagu helay dilal kala duwan oo ay ka geysteen Magaalada Muqdisho.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa 19-kii Bishii July ee sanadkii 2019 waxaa ay xukun dil toogasho ah ku riday Macalin Ilkacase iyo Xubno kale, kadib markii ay racfaan ka qaateen xukun dil ah oo horay loogu riday, kuwaas oo Maxkamadu sheegtay inay dilal qorsheysan iyo weerar kal geysteen Muqdisho.
DF Soomaaliya ayaa Barnaamij gaar ah ka diyaarisay Maxamed Xaaji Axmed oo Caan ku ahaa (Macalin Ilkacase), kas oo uu ku qiranayay in uu ahaa Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka qeyb qaatay dilal dhowr ah sidoo kale uu xilal kala duwan ka soo qabtay Al-Shabaab.
Ugu dambeyn, xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida, Janaraal Cabdullaahi Buulle kamey ayaa Warbaahinta u Akhriyay xukunka dilka ah ee lagu fuliyay Maxamed Xaaji Axmed oo Caan ku ahaa (Macalin Ilkacase) iyo laba Xubnood ee kale oo kawada tirsanaa Al-Shabaab.
Halka hoose ka dhageyso Codka Xukunka Xeer ilaaliyaha guud:
Macallin Ilkacase oo la toogtay
Maxkamadda Ciidanka Qalabka
Xukun qisaas ah